समायोजनपछि पनि २.३७ % घट्यो फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको शेयरमूल्य
मंसिर ५, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार समायोजनपछि पनि फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्य घटेको छ ।
कम्पनीको प्रस्तावित १० प्रतिशत बोनस शेयर प्रयोजनका लागि नेप्सेले मूल्य समायोजन गरेको थियो । कम्पनीको बिहीवार कायम अन्तिम शेयरमूल्य १ हजार १४ को आधारमा नेप्सेले बोनसपछिको मूल्य रू. ९२१ दशमलव ८२ तोकेको थियो ।
समायोजन पछि रू. ९४० मा खुला भएको कम्पनीको शेयरमूल्य न्यूनतम रू. ८८५ देखि अधिकतम रू. ९४० सम्म पुगेर अन्तिम मूल्य रू. ९०० मा झरेको हो । यस दिन समायोजनपछि पनि कम्पनीको शेयरमूल्य २ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. २१ दशमलव ८२ ले घटेको हो । यस दिन कम्पनीको रू. १ करोड १८ लाख २७ हजार बराबरको १३ हजार १६२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
कम्पनीले यस वर्ष बोनस शेयरसँगै कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांशसमेत वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश सहित अन्य विविध प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले मंसिर १६ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सो सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले मंसिर ५ गते बुक क्लोज गरेसँगै नेप्सेले बुक क्लोजपछिको मूल्य तोकिदिएको हो ।
आइतवार समायोजन पछिको मूल्यको आधारमा कम्पनीको शेयर कारोबार खुला हुनेछ । आइतवारदेखि कारोबारमा सहभागी लगानीकर्ताहरुले भने कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश पाउनेछैनन् ।